अभिनेत्री पूजा शर्माको निवेदनप्रति नेपाली फिल्मका ७ संस्थाले एकबद्धता - City Post Daily
August 18, 2020 मनोरञ्जन
काठमाण्डौ, २ भदौ । अभिनेत्री पूजा शर्माको निवेदनप्रति नेपाली फिल्मका ७ संस्थाले एकबद्धता जनाएका छन । अभिनेत्री शर्माको निवेदनप्रति नेपाली फिल्मका ७ संस्थाले एकबद्धता जनाउँदै पत्रकार सुवेदीले सञ्चालन गर्दै आएको ‘रजतपट’ र ‘ग्लामर गफ’ कार्यक्रममा सहभागी नहुन फिल्मकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । एपी वानमा प्रशारण हुने ‘रजतपट’ कार्यक्रममा पत्रकार प्रकाश सुवेदीले एक अभिनेत्रीको शारीरिक बनावटलाई लिएर अशिष्ट शब्द प्रयोग गरेपछि उनको व्यापक विरोध भयो । उक्त शब्द आफूप्रति लक्षित रहेको भन्दै अभिनेत्री पूजा शर्माले फिल्म सम्बद्ध विभिन्न संघ(संस्थामा उजुरी दिएकी छन् । यद्यपि, पत्रकार सुवेदीले आफूले बोल्न नहुने शब्द बोलेको भन्दै माफी मागिसकेका छन् ।
तर, सात संस्थाले एकबद्धता जनाउँदै जारी गरेको विज्ञप्तीको फिल्मकर्मीहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार सुवेदीले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागिसकेको अवस्थामा फिल्म सम्बद्ध संघ(संस्था मिलेर फिल्मकर्मीलाई कार्यक्रममा नजान आग्रह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहेको फिल्मकर्मीहरुको तर्क छ । यो निर्णय तत्काल सच्याउन फिल्मकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी, अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अभिनेता भुवन केसीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । गएको महिना उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भिडियो पोस्ट्याउँदै अभिनेता केसीले फिल्म ‘ड्रिम्स’ को सेटमा आफूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको र जापानमा भएको अवार्डमा गालामा मुख जोड्याउन खोजेको आरोप लगाएकी थिइन् । साम्राज्ञीले आफूमाथि झुटा आरोप लगाएर मान प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भन्दै ‘ड्रिम्स’ का निर्देशक समेत रहेका केसीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० करोडको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेका छन् । साम्राज्ञीले भने आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे पनि नडराउने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । फिल्मकर्मीबाट आफूलाई साथ नमिले पनि एक्लै लड्ने उनको अडान छ ।
यसबीच, उनले आइतवार इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट गर्दै ‘नयाँ दिन, नयाँ अध्याय’ भनेर उल्लेख गरेकी छन् । उनको यो भनाईबाट आजको दिन उनले नयाँ अध्याय सुरु गर्न लागेको बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यो अध्याय के हो उनले खुलाएकी छैनन् । अदालतमा पुगेको मुद्धामा कुनै ट्विस्ट त आउँदै छैन ? वा, उनले आफ्नो जीवनमा कुनै निर्णय लिँदैछन् ? धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने उनले हालै एक फिल्म साइन गरेकी छन्, जसमा उनको अपोजिटमा मनिष राउत देखिँदैछन् । फिल्ममा आना शर्माको पनि अभिनय रहनेछ । योभन्दा अगाडि उनले हेमराज विसीको फिल्म गर्नेछन् । यसमा उनले प्रदीप खड्कासँग रोमान्स गर्दैछिन् । उनलाई आफ्नो स्टारडमले दर्शक हलसम्म तान्न सक्ने ल्याकत भएकी अभिनेत्री भन्ने गरिन्छ ।
एसइईको नतिजा सार्वजनिक, पुर्नयोग नहुने